Vitam-be tsy misy loto
Ny vitaminina rehetra dia voazara ho vitaminina amin'ny rano maloto sy matavy. Araka ny fantatrao, ity farany dia manana bonus tsara ho an'ny voalohany: manana ny fananana haka ao amin'ny tavy sy ny taolana. Noho izany dia tsy manamaivana ny fihinanana sakafo avy amin'ny sakafo izy ireo, fa manana tahiry foana ao amin'ny vatana. Na izany aza, io trangan-javatra io koa dia manana ny lafiny ratsy - Vitaminina tafahoatra ao amin'ny vatana koa dia tsy hahasoa anao. Tadidio - ilaina ny fepetra rehetra!
Vitaminina matavy be dia be: ny endri-javatra ankapobeny
Ny fampahafantarana mazava indrindra momba ny vitaminina matavy dia ny latabatra. Ity karazana ity dia ahitana karazana toy ny vitamina A, D, E, K. Raha mazava tsara amin'ny anarany izany, dia azo ekena sy azo alaina amin'ny solvents organika ireo akora ireo - rano tsy misy herin'aratra.
Ireo vitamina ireo ihany koa dia manana andraikitra tena manan-danja: voalohany indrindra izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fitomboana, ny famerenana ny taolana sy ny epithelial, noho ny elasticity ny hoditra sy ny fahasalaman'ny volom-borona. Ny vitaminina matavy tsy voavaha no tokony horaisina mba hisian'ny tanora sy ny hatsarana. Ny endrik'ilay menaka fanosotra indrindra natao hanarenana ny hoditra sy hamerenana ny volony, dia ireo vitamina ireo.
Vitaminina matavy sy ny asany
Na dia azo lazaina amin'ny ankapobeny aza ny vitaminina matavy dia samy manana ny asany manokana ao amin'ny vatana. Tsy voatery foana ny hampiditra azy rehetra ao anaty trano iray: mety ho iray amin'ny iray amin'izy ireo no tsy mety.
Vitamin A (retinol, asidra retinoika)
Io vitamina io dia miforona ao amin'ny vatan'olombelona amin'ny karôotina, izay misy ao amin'ny sakafo amin'ny zavamaniry. Raha betsaka ny vitaminina ao amin'ny vatana, dia ho tsara foana ny fahitana, hijerena haingana haingana ny maizina. Ankoatra izany, ny hery fiarovan'ny hery fiarovana dia hamoaka avy hatrany ny valin'ny viriosy sy ny aretina. Ny sela rehetra ao amin'ny hoditra sy ny tsiranoka eo anatrehan'io vitamina io dia manavao tsy tapaka. Na izany aza, amin'ny dosie avo dia miteraka zava-doza vitamina A - mety miteraka taolam-paty, hoditra maina, fahalemena, fahitana marefo ary aretina hafa. Afaka mahazo izany avy amin'ny vokatra toy izany ianao: karazana karaoty, voankazo sy legioma rehetra, salady, doka mena , ary ronono, atody sy atody.
Vitaminina mahavariana izay mampiavaka ny vatana amin'ny masoandro. Raha 20 minitra farafahakeliny farafahakeliny farafahakeliny farafahakeliny ianao dia eo ambanin'ny lanitra misokatra, izany dia ampy mba hahazoana antoka fa tsy mijaly noho ny tsy fahampian'ny vatany ny vatana. Tena mampidi-doza ny fahabangany - miteraka aretina, manimba ny voa, fanaka ao am-po, fahalemena amin'ny hozatra. Tsy mahagaga raha manamafy ny maha-zava-dehibe ny fampiasana masoandro ny masoandro. Afaka mahazo izany amin'ny sakafo avy amin'ny sakafo toy ny atin'ny trondro, trondro matavy, tsaramaso, ronono, zezika manify, vokatra voankazo.
Ity vitamin ity dia natiora voajanahary voajanahary, izay ahafahany miaro sy manasitrana ny fahavoazana amin'ny sela sy ny dingana ao amin'ny vatana. Raha ampy ny Vitamin E, dia mampihena ny mety ho voan'ny homamiadana izany ary mampitombo ny fiarovana. Azonao atao ny mahazo vitamina avy amin'ny fatsim-bary, varia varimbazaha, voanjo, zezika, legioma marevaka.
Vitamin K (menaquinone, menadione, phyloquinone)
Ity vitamina ity dia ilaina amin'ny fiterahana ra, fa ny fandaniana azy dia mitarika ho amin'ny zava-mahadomelina sasany izay mamaritra ny voany. Ao amin'ny vatana mahasalama, io vitaminina io dia mirakitra amin'ny mikroflora intestinal. Afaka mahazo izany amin'ny sakafo ianao raha ampidirinao ao anaty sakafo ny singa toy izany: karazana varimbazaha, legioma marevaka, atody, ronono, atody.
Manaova fanaraha-maso amim-pitandremana ny fahasalamanao ary raiso ireo vitamina ireo raha tsy mahita famantarana tsy hita maso ianao fa tsy ampy ao amin'ny vatana.
Nahoana aho no tsy afaka misotro rano rehefa avy nihinana?
Tablets tsy mihoatra loatra
Inona no ilaina ho an'ny karaobi kohlrabi?
Ny votoatin'ny kalorie amin'ny vokatra ho an'ny fahavoazana
Firy ny kaloria amin'ny dite?
Firy ny kaloria amin'ny akrobe maina?
Ny kisoa dia mijery maso - inona no tokony hatao?
Ny fihenan'ny tongotra - ny antony
Toeram-piompiana bolamena amerikana
Monkey ho an'ny Taombaovao
Trano fonenana any Eoropa
Fahadiso amin'ny zaza - soritr'aretina
Ahoana ny fandondonana ny hafanana amin'ny zaza 3 taona aty?
Sandale tsy misy kodiarana 2016
Ny tsimoka varimbazaha dia tsara sy ratsy
Kianja Postcard-clamshell amin'ny tananao
Novonoina tamin'ny poma
Ahoana ny fandoroana baga chaga?
Shoes - Lohataona 2016